Ozi - mbupụ ụgbọ ala 6tons na -ebupụ na Philippines
Ụgbọ ala tụfuru
Ụgbọ ala traktọ
Ụgbọ ala na -ebu ibu
Ụgbọ ala mmanụ ụgbọala
Ụgbọ mmiri tankị mmiri
Onye na -egwupụta ihe
Ihe ntụgharị Rotary Drill Rig
Ụgbọ ala gwongworo
Ụgbọ ala jụrụ oyi
Onye na -anya moto
Onye na -eburu wiil
Obere ụgbọ ala 6tons na -ebupụ na Philippines
Iwu ụgbọ ala mini dump agwụla ma dị njikere maka nnyefe. Ụgbọ ala mkpofu Obere bụ otu usoro mkpofu mmiri na -ewu ewu, naanị n'afọ a, anyị ebupụlarị ihe karịrị otu narị obere ụgbọ ala ndị a na mba dị iche iche. Ịrụ ọrụ nke ọma, ọnụ ahịa akụ na ụba na ihe bara uru, na ọmarịcha ọdịdị na -eme ka ọ bụrụ ewu na ahịa gwongworo.
Ụgbọ ala tụfuru bụ ụgbọ ala na -ebupute ngwongwo n'onwe ya site na mbuli mmiri ma ọ bụ igwe. A makwaara ya dị ka gwongworo ụgbọ ala Ogwe ụgbọala na -akpụzi site na stamping na nke a na -ekwe nkwa ike nke obe.
Usoro axle pụrụ iche maka ụgbọ ala na -anya isi atụmatụ dị ka ntụkwasị obi dị elu, akụ na ụba mmanụ ọkụ, ọnụ ọgụgụ ndị bịaranụ dị elu, usoro siri ike, nnukwu ibu, ihe niile na -eme ka ọ dabara maka ọrụ injinịa dị ka ịrụ ụzọ na àkwà mmiri, ọrụ nchekwa mmiri.
A na -ejikarị gwongworo ndị a na -ebugharị ihe ebugharị obere ngwongwo ma ọ bụ na -ebuga nkata ma ọ bụ brik site na isi ya ruo ebe a na -ewu ya. Ọtụtụ mgbe, obere gwongworo ndị a na -atụba ụgbọ ala na -emegharị gburugburu na azụ iji mezue nnyefe nke ihe owuwu.
01. Ọpụrụiche na ụlọ ọrụ gwongworo ruo ọtụtụ afọ, anyị maara ihe gwongworo bụ maka, yana ihe ndị ahịa chọrọ n'ezie. Anyị nwere ike ịkwado nkọwapụta maka onye ahịa.
02. A na -ebupụ gwongworo na trailers anyị n'ihe karịrị mba 60 na mpaghara, dịka Philippines, Russia, Africa, South East Asia, North Asia, Middle East, South America na ndị ọzọ.
03. Ọrụ otu nkwụsị maka gwongworo na trailers niile si China, anyị nwere otu ọdụ ọrụ na mba ofesi, wee nye ndị ahịa ọrụ oge mbụ.
04. anyị nwere ụdị ngwaahịa dị iche iche, nwere ike izute ọrụ ndị ahịa chọrọ.
Nnukwu gwongworo: gwongworo traktọ, gwongworo na-ekpofu, gwongworo ihe igwe ihe, gwongworo CNG, gwongworo na-ebu, gwongworo tank, gwongworo ihe mkpofu, gwongworo ụgbọala niile, ụgbọ ala pụrụ iche, bọs. Trailers: ewepụghị bed, ala bed, VAN, nkwakọba, tankị, ụgbọelu ụgbọelu, osisi, Tipper, wdg
Okwu: NO.9 GAOJIADIAN, YANGZHUANG, LAIWU DISTRICT, JINAN, SHANDONG, CHINA
Mbupụ ụgbọ oloko na -ebufe na Malaysia
Trailer ala dị ala
Ụgbọ ala na -atụba ụgbọ mmiri dị njikere maka mbupu
Ụgbọ ala ndị friji na -echere nnyefe